Accueil > Gazetin'ny nosy > Ministeran’ny Tanora: Tsy ahitana teknisianin’ny fanatanjahan-tena intsony
Ministeran’ny Tanora: Tsy ahitana teknisianin’ny fanatanjahan-tena intsony
Tena diso tafahoatra loatra ny zava-mitranga ao amin’ny ministeran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-tena amin’izao fotoana izao. Zara raha misy teknisianina mitantana ny raharaha ara-panatanjahan-tena sy ny tanora ao amin’ity ministera ity. Olona 3 sisa nianatra mahakasika ireo taranja ireo no sisa miasa. Ny mpiasa ao amin’ny ministera nefa dia mahatratra hatrany amin’ny 50 raha kely indrindra. Olona tsy mahalala izay lohany sy vodiny amin’ny fanatanjahan-tena sy ny tanora avy no mameno ny trano. Hatrany amin’ny minisitra izany ka hatrany amin’ny mpamafa trano. Tsy misy miraharaha izay fampiroboroboana ny fanatanjahan-tena sy ny tanora izy rehetra fa nitady asa dia miasa toa ny mpiasam-panjakana rehetra ireny. Ny iray volana tsy ho banga ihany no mibaiko azy rehetra ireo. Izay minisitra tonga tao amin’ity ministeran’ny Tanora sy ny fanatanjahan-tena ity dia nampiditra ny fianakaviany sy ny zanany avokoa. Tena natao “dépôtoire” na fanariam-pako ity ministera ity amin’ny ankapobeny.
Raha mijery ireo minisitra nitantana ity minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahan-tena ity isika dia minisitra efatra ihany tamin’ny minisitra 15 mahery nitantana azy no manam-pahaizana manokana momba ny tanora sy ny fanatanjahan-tena. Nahitana mpandraharaha, mpampianatra, dokotera, mpisolovava, “disque jockey” na mpampandihy any amin’ny toeram-pandihizana ireny no olona efa nitondra sy nitantana tao.
Tsy vitan’ny hoe tsy teknisianina tamin’ny tanora sy ny fanatanjahan-tena izy ireo, fa sady tsy mpanao pôlitika koa. Tsy mahalala izay fotony sy lohany amin’ny pôlitika velively ka lasa nanaonao foana. Natao fanomezana fahafaham-po ny namana sy ny olona akaiky ny filohan’ny repoblika na ny praiminisitra no notendrena tao amin’ity ministera ity hatramin’izay ka hatramin’izao.
Tao anatin’ny 20 taona teo izay dia fatritran’olona no notendrena ho minisitra mitantana ity ministera ity. Tsy hita teo amin’ny sehatra ny fanatanjahan-tena, tsy hita na dia mba nihazakazaka teny amin’ny kianja na dia “footing” fotsiny aza no ataony indray mandeha isan-kerinandro na isam-bolana na isan-taona.
Tena forokontan’olona no mameno ny ministera ankehitriny. Tena mampalahelo, fa natao ho fanomezana “bonus” fotsiny sisa.
Marina fa tsy voatery ho olona teknisianina na nianatra izany no hatao minisitra, saingy fanapotehana ny ministera no ataon’izy rehetra ireny. Tsy misy mpiasa miresaka fanatanjahan-tena izany ao fa afera sy bizina daholo no heno ao raha mba miresaka. Misy aza tsy mahalala raha tsy baolina foot sy basket izy ireo.
Raha toa ka mba olona nikely aina tamin’ny fanatanjahan-tena koa izy ireny dia mba azo nekena ihany, saingy indrisy fa zavatra hafa tanteraka ivelan’ny fanatanjahan-tena no manavanana azy ireny.
Potika tanteraka ity ministera ity ankehitriny. Mba saika hanarina izany ny sendikan’ny mpampianatra fanatanjahan-tena sy ny tanora nefa nandamoka izany satria tsy nohenoin’ny fanjakana ny antsoantson’izy ireo. Toa ny sendika maro mitaky ny zony sy ny fanatsarana ny toeram-piasany ankehitriny izay nandroran’ny fanjakana izy ireo.
Manana teknisianina maro amin’ny tanora sy ny fanatanjahan-tena izay nahavita fianarana avy eto Madagasikara sy avy any ivelany nefa ity ministera ity. Mahagaga no tsy ampiasan’ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra izany fa forokontan’olona tsy mahalala izay “bi sy ba” no tendreny eo. Tena fanapotehana ny firenena tanteraka no azo andikana izany ary fanimbana ny tanora Malagasy.